Ntụle Semalt - Software Weghaara Ntanetị Weebụ maka Mmemme Ịntanetị gị
Ngwa ihe nchọgharị weebụ na-emepụta usoro nchịkọta data weebụ. nwere ike imejuputa ihe nchọgharị weebụ ọ bụla. Naanị ị ghaghị ịkọwa ebe data ị na-achọ ịnakọta, ngwaọrụ ndị a ga-emekwara gị ohere. A haziri ha maka ụlọ ọrụ na ndị ọkachamara ma chọghị nkà ọ bụla - pill box cocktail hats for weddings. Ụfọdụ n'ime ngwá ọrụ ndị a dị na Windows ma ndị ọzọ dị mma maka ndị ọrụ Linux.
1. Ogologo 80
80legs bụ ọrụ ntanetị a ma ama na ọrụ nchịkọta data. Ọ na-enye gị ohere ịmepụta ma na-agba ọsọ na weebụ iji nweta nsonaazụ ọchụchọ. Ejila 80legs n'elu n'elu netwọk kọwaa netwọk kesaa ma wepụ data sitere na ibe weebụ dị iche iche n'ime nkeji ole na ole.
Bubata. Ee bụ ngwá ọrụ scraping dị irè na nke a pụrụ ịdabere na ya . Okwadoro maka ụlọ ọrụ onwe ha na ụdị mba dị iche iche ma nwee ike ịga n'ihu n'ịchọpụta ụlọ akwụkwọ gị. Ọ dị mma maka ndị nta akụkọ ma nyere ha aka ịnakọta ozi site na ibe weebụ. Ngwá ọrụ nchịkọta data a na-anapụta ngwaahịa SaaS, na-enyere gị aka ịmepụta data dị n'ime ụdị chọrọ.
Jikọtara ya na nkà mmụta sayensị dị elu, Dexi. I bụ otu ihe magburu onwe ya na otu n'ime ihe ntanetị weebụ ntanetị na weebụ. Henrik, onye na-arụ ọrụ kọmputa, na-emepụta ihe na-enye gị ihe kacha mma. Ejila ụlọ ọrụ 20,000 dịka Samsung, Microsoft, Amazon, na PwC kwadoro Dexi's Smart Automation Platform.
Webhouse. ọ na-enyere ndị ụlọ ọrụ aka ịnakọta, wepụ ma hazie data na ụzọ dị irè ma dị irè. Ọ bụ usoro nke usoro igwe ojii nke dị mfe iji ma na-enye nsonaazụ ndị nwere ike ịdaba n'otu ntabi anya. Webhouse. Ee bụ ezigbo ụzọ ọzọ na Mozenda ma nwee ike tinye ya na ọkwa ụlọ ọrụ. Iji ngwá ọrụ a, ị nwere ike bipụtara nsonaazụ nsonaazụ TSV, JSON, CSV na ụdị XML.
Scrapinghub bụ otu n'ime mmemme nchịkọta data kachasị mma iji mee ihe. Ọ na-enye anyị ohere ihichapụ ma ọ bụ wepu ibe weebụ dị iche iche n'enweghị ihe ọmụma ọ bụla. Ọzọkwa, Scrapinghub na-enye anyị ike nke crawling na ebe nrụọrụ weebụ si ọtụtụ adreesị IP ma ọ bụ ọnọdụ.
7. Anya na-ahụ anya
Ntụle anya dị mma maka iwepụta data sitere na ihe oyiyi na PDF. Ọ na-esi ike maka ụlọ ọrụ na onye mmemme iji nakọta ozi sitere na ebe nrụọrụ weebụ na-elekọta mmadụ, mana Anya nyocha nwere ike ịnakọta data sitere na Facebook na Twitter. Ya na crawler n'ịntanetị na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịdepụta ibe weebụ gị ma mezie arụmọrụ gị dum.
8. Swepụtara Hub
Outwit Hub bụ ngwa ntanetị weebụ. A na-eme ya iji wepu ozi site na ntanetị na mpaghara ntanetị ma nata URL, ihe oyiyi, akwụkwọ weebụ na ahịrịokwu, na-eme ka ọrụ gị dịkwuo mfe. Ọ nwere ike inye ntinye ma usoro na-ezughị ezu na haziri ahazi ma na-ebupụ data gị na teepu.